Imibuzo ephezulu malunga ne-PRINCE2 Certified Answered! - ITSHO
Imibuzo ephezulu malunga ne-PRINCE2 Certified Answered!
I-Prince2 yimiqathango phakathi kweyona nto ifunwa emva kokuqinisekiswa kwendawo yolawulo lweprojekthi. Nangona ukhetha ukuba uthathe uvavanyo okanye cha, kukho imibuzo enokuthi ifikelele kwiimeko zokuhlala. Le mibuzo iyona nto ininzi ichazwe ngokubaluleka, iintlobo, ukulungiselela, ukuqeqeshwa kunye nazo zonke iimbono ezinjalo.
Ekuvukeni kokukhangela kwinqanaba elikhulu, siye saqokelela imiba ethile ngokwenene kwi-Prince2 isatifikethi kwaye uyayibhalela ukuze ukwazi ukulungelelanisa ukhetho oluthile kakhulu.
1. Ziziphi iiNzuzo eziMkhulu zeChrist2 Certification?
I-Prince2 Certification izakukunceda ukuba uzuze amahle ulawulo lweprokjekthi iimpawu ukuze umntu angakwazi ukujongana lula nomsebenzi ngaphandle kokuphazamiseka. Kuya kuphucula ubuchule bakho kwiinkalo ezahlukeneyo zeeprojekthi ezifana nokuphathwa kwabasebenzi, ukusetyenziswa kweempahla, kunye novavanyo lwengozi.
Ngokukubonisa indlela echanekileyo yokulawula umvuno weprojekthi, iya kwakha iingxaki zakho zokuqeshwa kwinqanaba lezona zinto zingcono imibutho yolawulo lweprojekthi kwiplanethi.
2. Ziziphi iimpawu eziphambili zeChrist2 Certification?
Kubonakala ukuba ibonakalisa iinxalenye zomntu ngamnye osebenza naye ojongene nohlobo lwee modyuli.
Kulula ukuyisebenzisa kwiiprojekthi ngenxa yendlela yayo ngqo kunye neendlela.
Ukulawulwa kweMicrosoft yeprojekthi kunokuba kwenziwe ngokungazenzisiyo njengoko ihlula iphrojekthi ngokupheleleyo kwiimodyuli ezincinci.
3. Ziziphi iintlobo ezahlukeneyo zeChrist2 Certification?
Kukho iziqinisekiso ezintathu ze-Prince2, ngokukodwa:
Ikhosi yoqinisekiso lwezakhono
Inkqubo ye-Prince2 isiseko sinokukunceda ekuqondeni iingcamango ezibalulekileyo, ukuphawula kunye nezicwangciso. Emva kokusebenza ngokufanelekileyo kwesiqinisekiso kunye nokuqeqeshwa okufunekayo, omnye uya kuba ngumqeqeshi weklasi.
Ikhosi yeengcali iza kukunceda ekuqondeni izicwangciso ezichanekileyo ekusebenziseni iinkqubo kunye neendlela ze-Prince2 kwiimeko ezahlukeneyo kunye neeprojekthi. Le khosi inxube yeengcinga kunye ne-commonsense eqinisekisiwe.
Ikhosi yesithathu neyokugqibela yi-Prince2 isatifikethi sobugcisa, esilwa ngabashenxisi belizwe abangaqhelekanga.
Ukugcina isatifikethi sakho sisisigxina, kufuneka umntu athathe uvavanyo lweemviwo ngokukhawuleza ukuba aphinde abuyiselwe.
4. Ungayilungiselela njani i-Prince2 Certification?
Kukho ukhetho olukhethiweyo olukhethiweyo xa ulungele le siqinisekiso. Omnye ukusetha ngaphandle kokuba omnye umntu abe negalelo ekhaya kwaye enye enye indlela yokuya kuqeqesho.
Omnye unokukwazi ukulungela ekhaya ngokusebenzisa incwadi yasePrince2. Umntu kufuneka enze ilungiselelo lokulungiselela aze alisebenze kwizinto ezinomdla. Omnye kufuneka enze imizamo yokugcina izinto ezahlukileyo. Yonke into ibalulekile kwaye ixhomekeke kuyo.
Unokuhlola kwakhona: - Isikhokelo esigqibeleleyo kwisiqinisekiso se-Prince2
Thatha uQeqesho loQeqesho loQeqesho
Imibutho eyahlukeneyo inikezela uqeqesho lokuqinisekisa isatifikethi se-Prince2. Unokufuna i-intanethi ukukhangela ukhetho olukhethiweyo. Ezi zikhundla ziye zahlangana nabacebisi, cinga ngezixhobo, amanqaku amanqaku kunye neemvavanyo ezihlekisayo ezikunceda ukuba zilungele ukuhlolwa.
Unako ukusekela i-web ngokusekelwe kwithuba lokuba ungenayo amandla okwaneleyo ukuya kwiiklasi zesiko. Ezi zango-intanethi ziguqule iimeko kwaye zenze abaqeqeshi abaza kukunceda ekuthathweni kwikhosi.
Ngaphambi kokukhetha nayiphi na imibutho okanye umcebisi we-intanethi, vele ucele uphicotho-zincwadi kunye neirekhodi ezidlulileyo ngenjongo onokuwela kuyo ukujonga iimeko zabo zokuba zilungele kumashishini.
Iingcebiso ezimbalwa zokuCima iMviwo
Funda iimpendulo ezifanelekileyo ngokukhawuleza - Imibuzo yimizekelo eyahlukeneyo, ngoko kufuneka udibanise enye indlela kwaye ukhethe okulungileyo. Indlela yakho kufuneka ibe kukuphendula impendulo engabalulekanga kuqala kwaye emva koko uyivuselele inkqubo.
Ulawulo lwexesha luyintloko - Omnye ufumana iiyure ze-2.5 nje, ukususela ngoku ukugqiba uphando ngalunye kwixesha elifikelelekayo liyisiseko.
Ngaba ezininzi iimvavanyo ezihlekisayo Uvavanyo lokuxakaza luya kunceda umviwa ukuba abe novavanya lokwenene, kwaye kunye namalungiselelo ahlukeneyo okuvavanya, umntu unokusasaza iziphumo aze alungiselele leemviwo ngendlela efanayo.
Ngaba kukho nayiphi na imibuzo efunyenwe neChrist2 Certification, ehlala ingaphendulwa? unokuzibuza kumazwana.
Ukuthelekiswa phakathi kwe-PMP V / s PRINCE2 Iziqinisekiso
PMP vs PRINCE2 vs CAPM: Yiyiphi into endikhethayo kum?